SOLTELCO Waa Nin Cuqdadaysan Oo Aan Duqa Caasimadda Hargeysa U Qalmin By Caaqil Siciid Boodhle Xaaji Xasan | Somaliland One
SOLTELCO Waa Nin Cuqdadaysan Oo Aan Duqa Caasimadda Hargeysa U Qalmin By Caaqil Siciid Boodhle Xaaji Xasan
Waxa aan in badan naftayda weydiin jiray sababta uu Maayar SOLTELCO isaga dhego-tiro tabashada qaar ka mid ah degmooyinka Hargeysa sida Gacan-libaax, Axmed Macallin Haaruun, Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge. Tusaale ahaan muddo sannad ku dhaw ayaa Dawladda Hoose laga sugayay in ay hirgeliso dhismaha waddada Xabaalaha Naasa-hablood, dad shacab ah ayaa hantidooda bixiyay oo daammurkii keenay. Duqa Caasimaddu waxa uu ka dhega-adaygay in uu cagafyada iyo qalabka kale keeno. Tallaabadani waxay sababtay in lagu baaqo in Hargeysa loo sameeyo laba maayar sida ay imakaba u qayb-san yihiin xilal ay ka mid yihiin
Taliyaha Saldhigga Bariga iyo Galbeedka Hargeysa Ee Boolis
Guddoonka waxbarashada Bariga iyo Galbeedka Maroodi-jeex
Ciidanka waddooyinka Hargeysi laba saldhig oo Bari iyo Galbeed ah
Istaadyoonka Hargeysa iyo ka laga dhisayo Woqooyiga Hargeysa (SOLTELCO ayaa hawhiisa wada)
Waxaynu sidoo kale ognahay in muddo sannad ku dhaw laga warwareegayo dhismaha waddada isku xidha Madaarka Cigaal iyo faras-magaalaha Hargeysa oo ah muraayadda dalka. Waxa ka hadlay Marwada kowaad ee Qaranka, Maayar ku-xigeenka iyo Guddiga Horumarinta Caasimadda Hargeysa. Halka uu ka sameeyay waddada Goljanno, Jigjigayar, Xera-awr, Xawaadle iyo 150ka ku wareegta. Boqolkiiba siddeetan (80%) wuxuu dhisaa waddooyinka qoyskiisa, sida aan qabo. Waa sababta loogu naanayso “Maayarka Goljanno”.. Xitaa waxa uu sii qaybiyaa dadkiisa. Kolkii lagu dhawaaqay 25ka Xildhibaan ee Hargeysa u soo baxay ayuu SOLTELCO yidhi “Maayar ayaan doonayaa. Yuusuf Warsame Siciid waa reer Axmed, iyagaa haysta Wasiirka Nuux Ismaaciil. Duqa Caasimaddana kuma darsan karaan”. Ergo tolkii ah baa ku qancisay in uu ka hadho Marxuum Yuusuf Warsame Siciid oo ahaa waayo-arag. Intaas kumay hadhin SOLTELCO iyo xertiisu waxay Marxuum Yuusuf u bixiyeen “Aas Qaran”. Iyaga oo u jeeda “Kani in loo sameeyo aas qaran ayuu xilka u doontay”. Wuxuu geeriyooday markuu xilka hayay dhawr bilood. Dumar ka baroortay Madaarka Hargeysa markii meydka maayarkii hore la soo dejiyay ayaa yidhi “Cawri iyo il buu doontay. Alla jabnayeey muu iskaga joogo”. Iyada oo aan asaydii la dhigin ayaa SOLTELCO la doortay 14kii April 2013ka, isaga oo hannaankii qabyaaladda maray. Sanadkii hore marar deyrka Gacan-libaax laga dhisayay qolal la kireeyo, waxa ay SOLTELCO iyo xertiisu odhan jireen “Inaga ilaaliya xitaa reer Saaxil/Ciise Muuse. Waa in dad beesheenna ah lagu qoraa”.
Halkee ayuu Maayarku cuqdadda ka qaaday?. Sannadkii 1999kii ayuu Maayarka aabbihii (Marxuum Maxamuud Caydiid) nin tuug ah oo ka soo jeeda bariga iyo koonfurta ka soo jeedaa middi ku geliyay meel u dhaw jeelka weyn ee Hargeysa. Tuuggu wuxuu doonay in uu odayga lacag ka qaado, waanu isku dhejiyay. Sidaas awgeed ayuu middi ugu dhuftay. Odaygi isaga oo dhiig-baxaya ayuu ku dhegay tuuggii, kaddibna dad shacab ah ayaa tuuggii gacanta ku dhigay, odaygina halkaas ayuu ku dhintay. Inta xabsiga la dhigay gacan-ku-dhiiglihii ayaa la qisaasay. Subaxnimadii dambe wuxuu SOLTELCO wargeysyada dalka ku qoray maqaal ciwaankiisu ahaa “Waxaan u mahad-naqayaa dadkii qabtay gacan-ku-dhiiglihii aabbahay xaq-darrada ku dilay”. Waa markii kowaad ee aan magaciisa saxaafadda ku arko.
Haddaba Maayarka waxa aan leeyahay, aabbahaa gacan ka xaq-daran ayuu ku dhintaye ha gocan. Dadkana ha u colaadin fal uu nin tuug ahi sameeyay oo aanay jilib, degmo, ardaa iyo laba qof ka tashan. Waanu ka xunnay gefka aabbahaa ku dhacay. Dembiilihiina waxa la mariyay jidkii sharciga ahaa ee diintu sheegtay. Qabyaaladda caynkan ah kuma noqon kartid madax. Waxaad ku fiicnayd in aad caaqil reer noqoto oo aad iska casisho kursiga caasimadda u sarreeya.
Caaqil Siciid Boodhle Xaaji Xasan
Caaqilka Dhallinyarada Jamhuuriyadda Somaliland